peji yemusoro wenyaya
Kurongwa Kwenguva Kwezvirimukati
Dzidziso neZvibvumirano 1
Dzidziso neZvibvumirano 2
Dzidziso neZvibvumirano 3
Dzidziso neZvibvumirano 4
Dzidziso neZvibvumirano 5
Dzidziso neZvibvumirano 6
Dzidziso neZvibvumirano 7
Dzidziso neZvibvumirano 8
Dzidziso neZvibvumirano 9
Dzidziso neZvibvumirano 10
Dzidziso neZvibvumirano 11
Dzidziso neZvibvumirano 12
Dzidziso neZvibvumirano 13
Dzidziso neZvibvumirano 14
Dzidziso neZvibvumirano 15
Dzidziso neZvibvumirano 16
Dzidziso neZvibvumirano 17
Dzidziso neZvibvumirano 18
Dzidziso neZvibvumirano 19
Dzidziso neZvibvumirano 20
Dzidziso neZvibvumirano 21
Dzidziso neZvibvumirano 22
Dzidziso neZvibvumirano 23
Dzidziso neZvibvumirano 24
Dzidziso neZvibvumirano 25
Dzidziso neZvibvumirano 26
Dzidziso neZvibvumirano 27
Dzidziso neZvibvumirano 28
Dzidziso neZvibvumirano 29
Dzidziso neZvibvumirano 30
Dzidziso neZvibvumirano 31
Dzidziso neZvibvumirano 32
Dzidziso neZvibvumirano 33
Dzidziso neZvibvumirano 34
Dzidziso neZvibvumirano 35
Dzidziso neZvibvumirano 36
Dzidziso neZvibvumirano 37
Dzidziso neZvibvumirano 38
Dzidziso neZvibvumirano 39
Dzidziso neZvibvumirano 40
Dzidziso neZvibvumirano 41
Dzidziso neZvibvumirano 42
Dzidziso neZvibvumirano 43
Dzidziso neZvibvumirano 44
Dzidziso neZvibvumirano 45
Dzidziso neZvibvumirano 46
Dzidziso neZvibvumirano 47
Dzidziso neZvibvumirano 48
Dzidziso neZvibvumirano 49
Dzidziso neZvibvumirano 50
Dzidziso neZvibvumirano 51
Dzidziso neZvibvumirano 52
Dzidziso neZvibvumirano 53
Dzidziso neZvibvumirano 54
Dzidziso neZvibvumirano 55
Dzidziso neZvibvumirano 56
Dzidziso neZvibvumirano 57
Dzidziso neZvibvumirano 58
Dzidziso neZvibvumirano 59
Dzidziso neZvibvumirano 60
Dzidziso neZvibvumirano 61
Dzidziso neZvibvumirano 62
Dzidziso neZvibvumirano 63
Dzidziso neZvibvumirano 64
Dzidziso neZvibvumirano 65
Dzidziso neZvibvumirano 66
Dzidziso neZvibvumirano 67
Dzidziso neZvibvumirano 68
Dzidziso neZvibvumirano 69
Dzidziso neZvibvumirano 70
Dzidziso neZvibvumirano 71
Dzidziso neZvibvumirano 72
Dzidziso neZvibvumirano 73
Dzidziso neZvibvumirano 74
Dzidziso neZvibvumirano 75
Dzidziso neZvibvumirano 76
Dzidziso neZvibvumirano 77
Dzidziso neZvibvumirano 78
Dzidziso neZvibvumirano 79
Dzidziso neZvibvumirano 80
Dzidziso neZvibvumirano 81
Dzidziso neZvibvumirano 82
Dzidziso neZvibvumirano 83
Dzidziso neZvibvumirano 84
Dzidziso neZvibvumirano 85
Dzidziso neZvibvumirano 86
Dzidziso neZvibvumirano 87
Dzidziso neZvibvumirano 88
Dzidziso neZvibvumirano 89
Dzidziso neZvibvumirano 90
Dzidziso neZvibvumirano 91
Dzidziso neZvibvumirano 92
Dzidziso neZvibvumirano 93
Dzidziso neZvibvumirano 94
Dzidziso neZvibvumirano 95
Dzidziso neZvibvumirano 96
Dzidziso neZvibvumirano 97
Dzidziso neZvibvumirano 98
Dzidziso neZvibvumirano 99
Dzidziso neZvibvumirano 100
Dzidziso neZvibvumirano 101
Dzidziso neZvibvumirano 102
Dzidziso neZvibvumirano 103
Dzidziso neZvibvumirano 104
Dzidziso neZvibvumirano 105
Dzidziso neZvibvumirano 106
Dzidziso neZvibvumirano 107
Dzidziso neZvibvumirano 108
Dzidziso neZvibvumirano 109
Dzidziso neZvibvumirano 110
Dzidziso neZvibvumirano 111
Dzidziso neZvibvumirano 112
Dzidziso neZvibvumirano 113
Dzidziso neZvibvumirano 114
Dzidziso neZvibvumirano 115
Dzidziso neZvibvumirano 116
Dzidziso neZvibvumirano 117
Dzidziso neZvibvumirano 118
Dzidziso neZvibvumirano 119
Dzidziso neZvibvumirano 120
Dzidziso neZvibvumirano 121
Dzidziso neZvibvumirano 122
Dzidziso neZvibvumirano 123
Dzidziso neZvibvumirano 124
Dzidziso neZvibvumirano 125
Dzidziso neZvibvumirano 126
Dzidziso neZvibvumirano 127
Dzidziso neZvibvumirano 128
Dzidziso neZvibvumirano 129
Dzidziso neZvibvumirano 130
Dzidziso neZvibvumirano 131
Dzidziso neZvibvumirano 132
Dzidziso neZvibvumirano 133
Dzidziso neZvibvumirano 134
Dzidziso neZvibvumirano 135
Dzidziso neZvibvumirano 136
Dzidziso neZvibvumirano 137
Dzidziso neZvibvumirano 138
Chirevo cheChechi 1
Chirevo cheChechi 2
Dzidziso neZvibvumirano zviunganidzwa zvezvakazarurwa zvinoyera nezvirevo zvakafemerwa zvakapihwa kuitira kumiswa nokugadziridzwa kweumambo hwaMwari pano pasi mumazuva ekupedzisira. Kunyangwe zvazvo zvikamu zvizhinji zvakanangana nenhengo dzeChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira, mashoko, yambiro nezvikomekedzwa zviripo pakubatsira munhu wose uye zvinekukoka kuvanhu vose kwose kwose kuti vanzwe izwi raIshe Jesu Kristu, vachitaura kwavari nezveupenyu hwavo hwenguva ino nezveruponeso rwavo rwusingaperi.
Zvakazarurwa zvakapiwa kuburikidza nekuna Joseph Smith Muporofita, munguva yemuchechi wakakosha wemagosa eChechi, wakaitirwa paHiram, kuOhio, 1 Mbudzi, 1831 (History of the Church [Nhoroondo yeChechi], 1:221–224). Zvakazarurwa zvizhinji zvakanga zvagamuchirwa kubva kuna Ishe nguva iyi isati yasvika uye kuiswa pamwechete kweizvi kuti zvishambadzwe zvave bhuku, ndicho chaive chimwe chezvinhu zvikuru zvakatenderanwa pamusangano uyu. Chikamu ichi chinoita chisumo chaIshe kuzvidzidziso, zvibvumirano, uye nemirairo yakapihwa munguva ino.
Zvakabviswa kubva mumazwi engirozi Moronai kuna Joseph Smith Muporofita, ari mumba mababa veMuporofita kuManchester, New York, manheru emusi wa21 Gunyana, muna 1823 (History of the Church, 1:12). Moronai ndiye aive wekupedzisira wemudungwe murefu wevanyori venhoroondo uyo vakaita zvinyorwa izvo zvave pamberi penyika iyezvino seBhuku raMormoni. (Yenzanisa Maraki 4:5–6; nezvikamuwo 27:9; 110:13–16; ne128:18).
Zvakazarurwa zvakapiwa kuna Joseph Smith Muporofita paHarmony, Pennsylvania, Chikunguru 1828, maererano nokurasika kwemapeji zana negumi nenhanhatu egwaro rakadudzirwa kubva muchikamu chekutanga chemuBhuku raMormoni, icho chainzi bhuku raRihai. Muporofita akanga abvuma achitsutsumwa kuti mapeji aya abve mumaoko ake aende mumaoko aMartin Harris, uyo akange ashanda kwechinguvana semunyori mukududzirwa kweBhuku raMormoni. Zvakazarurwa zvakapiwa kuburikidza neUrimi neTumimi. (History of the Church, 1:21–23.) (Ona chikamu 10.)
Zvakazarurwa zvakapiwa kuburikidza nekuna Joseph Smith Muporofita zvichipihwa kuna baba vake, Joseph Smith, Baba, paHarmony, Pennsylvania, muna Kukadzi 1829 (History of the Church, 1:28).
Zvakazarurwa zvakapiwa nekuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHarmony, Pennsylvania, Kurume, 1829, zvakumbirwa naMartin Harris (History of the Church, 1:28–31).
Zvakazarurwa zvakapiwa kuna Joseph Smith Muporofita uye naOliver Cowdery, paHarmony, Pennsylvania, mwedzi waKubvumbi 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery akatanga mabasa ake semunyori mukududzira Bhuku raMormoni musi wa7 Kubvumbi 1829. Akange atogamuchira kare kuiswa pachena kutsvene kwechokwadi cheuchapupu hweMuporofita maererano nezvemahwendefa akanga akanyorwa zvinyorwa zveBhuku raMormoni. Muporofita akabvunza Ishe kuburikidza neUrimi neTumimi akagashira mhinduro iyi.
Zvakazarurwa zvakapiwa kuna Joseph Smith Muporofita naOliver Cowdery, paHarmony, Pennsylvania, Kubvumbi 1829, pavakabvunza kuburikidza neUrimi neTumimi kuti Johane, mudzidzi aidiwa zvikuru, agere here munyama kana kuti akafa. Zvakazarurwa izvi kumwe kududzira kwezvinyorwa zvakaitwa padehwe naJohane uye zvikavigwa naiye pachake (History of the Church, 1:35–36).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Oliver Cowdery, paHarmony, Pennsylvania, mwedzi weKubvumbi 1829 (History of the Church, 1:36–37). Mukududzirwa kweBhuku raMormoni, Oliver, akaramba achishanda ari munyori, achinyora zvaidaidzirwa neMuporofita, akada kuti apihwe chipo chekududzira. Ishe vakapindura kukumbira kwake nekupa chakazarurwa chino.
Zvakazarurwa zvakapiwa nekuna Joseph Smith Muporofita kuna Oliver Cowdery, paHarmony, Pennsylvania mwedzi waKubvumbi 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver anotsiurwa kuti ave nemwoyo murefu uye anokurudzirwa kuti agutswe nekunyora, kwenguva ino, achidaidzirwa nemududziri, pane kuti ayedze kududzira.
Zvakazarurwa zvakapiwa kuna Joseph Smith Muporofita, paHarmony, Pennsylvania muzhizha ra1828 (History of the Church, 1:20–23). Muno Ishe vanoudza Joseph nezvezvinhu zvakashandurwa nevanhu vakaipa, muma peji 116 ezvinyorwa zvakabva mukududzirwa kwebhuku raRihai, muBhuku raMormoni. Mapeji ezvinyorwa izvi akange arasika aina Martin Harris uyo akange amboapihwa. (Ona musoro wenyaya kuchikamu 3.) Zvakaipa zvakanga zvarongwa zvaive kududzirwa kwaitarisirwa zvekududzirwa zvakare kwezvinhu zvakanga zviri mumapeji ayo akanga abiwa, uye nokuzoshora mududziri nokuratidza zvakakanganiswa nekupindurudzwa kwakange kwaitwa. Kuti chinangwa chakaipa ichi chakanga chafungwa newakaipa uye zvaizikanwa naIshe kana pakanga Mormoni, munyori wechechi wakare wechiNifai, paaidimbudzira murwi wemahwendefa, zvinoratidzwa muBhuku raMormoni (tarisa Mazwi aMormoni 1:3–7).
Zvakazarurwa zvakapihwa nekuna Joseph Smith Muporofita kumukoma wake Hyrum Smith, paHarmony, Pennsylvania, Chivabvu 1829 (History of the Church, 1:39–46). Chakazarurwa ichi chakatambirwa kuburikidza neUrimi neTumimi semhinduro yekukumbira nekubvunza kwaJoseph. History of the Church inoti chakazarurwa ichi chakatambirwa mushure mekudzorerwazve kweHupirisita hwaAroni.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburukidza nekuna Joseph Smith Muporofita kuna Joseph Knight, Baba, paHarmony Pennsylvania, muna Chivabvu, 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight akadaira kuzvirevo zwaJoseph Smith maererano nokuve kwake nemahwendefa eBhuku raMormoni uye nebasa rekududzira raiitwa panguva iyoyo uye panguva zhinji akanga apa rubatsiro rwezvinhu kuna Joseph Smith nemunyori wake, izvo zvaiita kuti vagone kuramba vachidudzira. Nokukumbira kwaJoseph Knight, Muporofita akabvunza kuna Ishe uye akagashira zvakazarurwa izvi.
Kugadzwa kwaJoseph Smith naOliver Cowdery kuHupirisita hwaAroni mumahombekombe eRwizi rweSusquehanna, pedyo neHarmony, Pennsylvania, musi wa15 Chivabvu, 1829 (History of the Church, 1:39–42). Kugadzwa uku kwakaitwa nemaoko engirozi yakazvisuma saJohane, mumwecheteyo anonzi Johane Mubapatidzi muTestamente Itsva. Ngirozi yakatsanangura kuti yakanga ichiita izvi iri pasi pekuraira kwaPetro, Jakobo naJohane, Vaapositori vepasichigare, vakanga vaine kiyi dzehupirisita hwepamusoro, hwaidaidzwa kuti hupirisita hwaMerkizedeki. Chivimbiso chakapihwa kuna Joseph naOliver kuti nekufamba kwenguva Hupirisita hwaMerkizedeki huchaiswa pavari. (Tarisa chikamu 27:7, 8, 12.)
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza nekuna Joseph Smith Muporofita kuna David Whitmer, paFayette, New York, Chikumi 1829 (History of the Church, 1:48–50). Mhuri yekwaWhitmer yakange yavanechido chikuru mukududzirwa kweBhuku raMormoni. Muporofita akadzika hugari hwake pamusha paPeter Whitmer, Baba, apo paakagara kudakara basa rekududzira rapera uye kudakara mvumo yekushambadza bhuku raiuya iri yawanikwa. Vatatu vevanakomana vekwaWhitmer, mumwe nemumwe wavo agashira uchapupu hwechokwadi chebasa racho, vakava neshungu kwazvo pamusoro pebasa reumwe neumwe wavo. Chakazarurwa chino uye nezviviri zvinotevera (zvikamu 15 ne16) zvakapihwa semhinduro kukubvunza uku kuburikidza neUrimi neTumimi. David Whitmer pashure, akazove mumwe weVapupuri Vatatu kuBhuku raMormoni.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna John Whitmer, paFayette, New York, muna Chikumi 1829 (History of the Church, 1:50). (Ona musoro wenyaya kuchikamu 14.) Mashoko aya akanangana nemunhu mumwechete nokuti Ishe vanotaura zvakange zvichizivikanwa kuna John Whitmer chete uye naivo. John Whitmer akazove mumwe weVapupuri Vasere kuBhuku raMormoni.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Peter Whitmer, Mwana, paFayette, New York, muna Chikumi 1829 (History of the Church, 1:51). (Ona musoro wenyaya kuchikamu 14.) Peter Whitmer, Mwana, akazove mumwe weVapupuri Vasere kuBhuku raMormoni.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Oliver Cowdery, David Whitmer, naMartin Harris, paFayette, New York, muna Chikumi 1829, vasati vatarisa mahwendefa akanyorwa aive nezvinyorwa zveBhuku raMormoni (History of the Church, 1:52–57). Joseph nemunyori wake, Oliver Cowdery, vakanga vadzidza kubva mukududzira mahwendefa eBhuku raMormoni kuti vapupuri vatatu vanokosha vachasarudzwa (tarisa Eta 5:2–4; 2 Nifai 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer naMartin Harris vakatumwa nechido chekufemerwa kuti vave vapupuri vatatu vanokosha ivavo. Muporofita akabvunza kuna Ishe, uye chakazarurwa ichi chakapihwa semhinduro kuburikidza neUrimi neTumimi.
Zvakazarurwa kuna Joseph Smith Muporofita, Oliver Cowdery, naDavid Whitmer, zvakapihwa paFayette, New York, Chikumi 1829 (History of the Church, 1:60–64). Apo pakaunzwa Hupirisita hwaAroni, kupihwa kweHupirisita hwaMerkezideki hwakavimbiswa (ona musoro wenyaya kuchikamu 13). Semhinduro yekukumbirwa kweruzivo munyaya iyi, Ishe vakapa chakazarurwa chino.
Zvakazarurwa zvakapihwa nekuburikidza naJoseph Smith, paManchester, New York, Kurume, 1830 (History of the Church, 1:72–74). Munhoroondo yake, Muporofita akazvisuma “semurairo waMwari kwete wemunhu, kuna Martin Harris, wakapihwa naiye Vokusingaperi,” (History of the Church, 1:72).
Zvakazarurwa zviri maererano nehurongwa nehurumende yeChechi, zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, Kubvumbi 1830 (History of the Church, 1:64–70). Asati anyora maererano nezvakazarurwa zvino Muporofita akanyora, “Takawana kwaAri [Jesu Kristu] zvinotevera, nemweya wehuporofita nezvakazarurwa; izvo zvisina kutipa zivo yakawanda chete, asi zvakanongedzera kwatiri zuva chairo raizove, maererano neKuda Kwake, nekuraira, iro rataifanira kuenda mberi nokuronga Chechi Yake zvakare pano pasi” (History of the Church, 1:64).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita kuFayette, New York, 6 Kubvumbi, 1830 (History of the Church, 1:74–79). Chakazarurwa ichi chakapihwa pakarongwa Chechi, pazuva rataurwa, mumba maPeter Whitmer, Baba. Varume vatanhatu, vakanga vabhabhatidzwa, vaivepo. Nesarudzo yakabvumiranwa nevose vanhu ava vakaratidza chido chavo nokuzvipira kwavo kuti varonge, maererano nomurairo waMwari (ona chikamu 20). Vakabvumawo kugashira nekutsigira Joseph Smith, Mwana, naOliver Cowdery sevatungamiri veChechi. Nekugadza maoko, Joseph akagadza Oliver ugosa hweChechi, uye Oliver zvimwechetewo akagadzawo Joseph. Mushure mekuropafadza sakaramende, Joseph naOliver vakaisa maoko pamunhu nemunhu kuvapa Mweya Mutsvene uye nokusimbisa mumwe nemumwe senhengo yeChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa nekuna Joseph Smith Muporofita, paManchester, New York, Kubvumbi 1830 (History of the Church, 1:79–80). Chakazarurwa ichi chakapihwa kuChechi nekuda kwevamwe vakanga vakambobhabhatidzwa vachida kubatana neChechi pasina kubhabhatidzwa zvakare.
Zvakazarurwa zvakapihwa nekuna Joseph Smith Muporofita, paManchester, New York, Kubvumbi 1830, kuna Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, Baba; naJoseph Knight, Baba (History of the Church, 1:80). Pamusana pechido chemwoyo wose chevanhu vashanu vataurwa kuti mumwe nemumwe azive nezvemabasa ake, Muporofita akabvunza kuna Ishe uye akagashira chakazarurwa ichi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita naOliver Cowdery, paHarmony, Pennsylvania, Chikunguru 1830 (History of the Church, 1:101–103). Kana zvazvo kwakanga kwapera mwedzi isingasvike mina kubvira kurongwa kwakaitwa Chechi, kutambudzwa kwakanga kwatonyanya, uye vatungamiri vaitotsvaka kupona nekuzvivanza. Zvakazarurwa zvitatu zvinotevera zvakapihwa panguva iyi kuti zvivasimbise nokuvakurudzira, nokuvaraira.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paHarmony, Pennsylvania, muna Chikunguru 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Ona musoro wenyaya muchikamu 24.) Chakazarurwa ichi chinoisa pachena chido chaIshe kuna Emma Smith, mudzimai we Muporofita.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, Oliver Cowdery, naJohn Whitmer, paHarmony, Pennsylvania, Chikunguru 1830 (History of the Church, 1:104). (Ona musoro wenyaya muChikamu 24.)
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita paHarmony, Pennsylvania, muna Nyamavhuvhu 1830 (History of the Church, 1:106–108). Mukugadzirira kuitika kwechitendero apo sakaramende yechingwa newaini yaizoropafadzwa, Joseph akaenda kunotora waini. Akasangana nemutumwa wekudenga uye akagashira chakazarurwa chino, chidimbu chacho chakanyorwa panguva iyoyo asi zvakasara zvakazonyorwa muna Gunyana aitevera. Mvura iye zvino ndiyo yave kushandiswa kunze kwewaini panguva yesakaramende muChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, kuna Oliver Cowdery, paFayette, New York, Gunyana 1830 (History of the Church, 109–111). Hiram Page, nhengo yeChechi, aive nerimwe dombo uye achiti anogashira zvakazarurwa nokuyamurwa naro maererano nokuvakwa kweZioni uye nehurongwa hweChechi. Nhengo zhinji dzakanga dzanyengedzwa neizvi, uye kunyangwe Oliver Cowdery akaitiswa zvisiri izvo mukudaro. Muchechi mukuru usati waitwa, Muporofita akabvunza nemwoyo wake wose kuna Ishe maererano nenyaya iyi, uye chakazarurwa ichi chikabva chapihwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paine magosa matanhatu, paFayette. New York, Gunyana 1830 (History of the Church, 1:111–115). Zvakazarurwa izvi zvakapihwa mazuva akati kuti muchechi mukuru usati waitwa, waitanga musi wa26 Gunyana, gore 1830.
Zvakazarurwa zvakapihwa nekuna Joseph Smith Muporofita, kuna David Whitmer, Peter Whitmer, Mwana, naJohn Whitmer, paFayette, New York, Gunyana 1830, mushure memuchechi mukuru wemazuva matatu paFayette, asi magosa eChechi asati aparadzana (History of the Church, 1:115–116). Pakutanga chinyorwa chino chakaburitswa sezvakazarurwa zvitatu zvikazobatanidzwa kuita chikamu chimwechete neMuporofita kuitira kunyorwa muna 1835 kweDzidziso neZvibvumirano.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, kuna Thomas B. Marsh, Gunyana 1830 (History of the Church, 1:115–117). Chitiiko chainge chichangotevedza gungano reChechi (ona musoro wenyaya muchikamu 30). Thomas B. Marsh akange abhabhatidzwa mukutanga kwemwedzi akange agadzwa sagosa muChechi zvakazarurwa zvino zvisati zvapihwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Parley P. Pratt naZiba Peterson, Gumiguru 1830 (History of the Church, 118–120). Kufara kukuru nechido zvakanzwika namagosa pamusoro pemaRamani, avo vane maropafadzo akafanotaurwa pamusoro pavo akanga adzidzwa nezvawo neChechi kubva mubhuku raMormoni. Naizvozvo, munamato wakaitwa kuti Ishe varatidze kuda kwavo kuti magosa angatumirwe here panguva iyoyo kumarudzi emaIndia vari kuMadokero. Chakazarurwa ichi chakatevera.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Ezra Thayre naNorthrop Sweet, paFayette, New York, Gumiguru 1830 (History of the Church, 1:126–127). Mukunyora zvakazarurwa izvi, Muporofita akatsinhira kuti “Ishe vanogara vakagadzirira kudzidzisa avo vanotsvaka nesimba murutendo” (History of the Church, 1:126).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Orson Pratt, paFayette, New York, 4 Mbudzi 1830 (History of the Church, 1:127–128). Hama Pratt aive nemakore gumi nemapfumbamwe ekuzvarwa, panguva iyoyo. Akanga akapindutswa uye akabhabhatidzwa paakatanga kunzwa kuparidzwa kwevhangeri rakadzorerwa nemukoma wake Parley P. Pratt masvondo matanhatu akanga apfuura. Chakazarurwa ichi chakagashirirwa mumba maPeter Whitmer, Baba.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita naSidney Rigdon pa, kana pedyo neFayette, New York muna Zvita 1830 (History of the Church, 1:128–131). Panguva iyi, Muporofita akanga akabatikana zvingangove mazuva ose mukududzira Bhaibheri. Kududzira uku kwakatangwa muna Chikumi 1830, uye vose Oliver Cowdery naJohn Whitmer vakanga vashanda sevanyori. Sezvo zvino vakanga vadaidzwa kune mamwe mabasa, Sidney Rigdon akadaidzwa nokusarudzwa kutsvene kuti ashande semunyori weMuporofita mubasa iri (ona vhesi 20). Sechisumo kuzvinyorwa zvake zvechakazarurwa chino, Muporofita akanyora: “Muna Zvita Sidney Rigdon akauya [kubva kuOhio] kuzobvunza kuna Ishe, uye akauya naEdward Partridge … Chinguva chipfupi kubva mukusvika kwehama mbiri idzi, ndipo pakataura Ishe” (History of the Church, 1:128).
Zvakazarurwa zvakapiwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Edward Partridge, pedyo neFayette, New York, Zvita 1830 (History of the Church, 1:131). (Ona musoro wenyaya muchikamu 35). Muporofita akati Edward Partridge “akanga ari chiratidzo chehunamati, uye ari mumwe wevanhurume vakuru vaIshe” (History of the Church, 1:128).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita naSidney Rigdon, pedyo neFayette, New York, Zvita 1830 (History of the Church, 1:139). Muno ndimo muri kupihwa murairo wekutanga unotaura nezvekuunganidzwa pamukuwo uno.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith, Muporofita, paFayette, New York, musi wa2 Ndira 1831 (History of the Church, 1:140–143). Raive zuva regungano reChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna James Covill, paFayette, New York, 5 Ndira 1831 (History of the Church, 1:143-145). James Covill, uyo akambenge ari mushumiri weBaptist kwemakore angaita makumi mana, akabvumirana naIshe kuti anozoteerera wose murairo zvawo uyo waachapihwa naIshe kuburikidza naJoseph Muporofita.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita nekuna Sidney Rigdon, paFayette, New York, Ndira 1831 (History of the Church, 1:145). Pamberi pechinyorwa chechakazarurwa chino, Muporofita akanyora kuti, “Sekuramba kwakaita James Covill izwi raIshe, uye achidzokera kuzvinhu zvake zvakare nevanhu, Ishe vakapa kwandiri naSidney Rigdon chakazarurwa chinotevera” (History of the Church, 1:145).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, kuChechi, paKirtland, Ohio, 4 Kukadzi 1831 (History of the Church, 1:146–147). Bazi reChechi reKirtland panguva iyi rakange richikurumidza kukura muhuwandu hwevanhu. Pamberi pechakazarurwa chino, Muporofita akanyora kuti, “Nhengo … dzakanga dzichishingairira kuita kuda kwaMwari, sekuziva kwadzaiita, kana dai zvazvo dzimwe pfungwa dzisiriidzo nemweya yenhema yakange yapinda pakati pavo … [uye] Ishe akapa kuChechi zvinotevera” (History of the Church, 1:146–147).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 9 Kukadzi 1831 (History of the Church, 1:148–154). Zvakagashirwa pamberi pemagosa gumi nevaviri uye nemukuzadzikisa chivimbiso chaIshe chaakamboita chekuti “mutemo” waizopihwa muOhio (ona chikamu 38:32). Muporofita anotsanangura chakazarurwa chino achiti “zvinobata mutemo weChechi” (History of the Church, 1:148).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, muna Kukadzi 1831 (History of the Church, 1:154–156). Panguva iyi dzimwe nhengo dzeChechi dzakanga dzichikanganiswa nevanhu vaitaura zvenhema vachiti vazaruri. Muporofita akabvunza kuna Ishe uye vakatambira mazwi aya akanga akanangana nemagosa eChechi. Chidimu chekutanga chinobata nezve nyaya dzematongerwo eChechi; chechipiri chinopa yambiro yekuti magosa anofanira kupa kumarudzi enyika.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita naSidney Rigdon, paKirtland, Ohio, mukupera kwaKukadzi 1831 (History of the Church, 1:157). Mukuita chaidiwa chakatsanangurwa pano, Chechi rakasarudza kuti kuitwe muchechi mukuru mukutanga kwaChikumi waitevera.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuChechi, paKirtland, Ohio, 7 Kurume 1831 (History of the Church, 1:158–163). Achisuma zvinyorwa zvezvakazarurwa izvi, Muporofita akati “panguva iyoyi yeChechi … zvizhinji zvenhema … uye nenyaya dzisina maturo, dzakange dzashambadzwa … dzikatumirwa, … kuitira kudzivirira vanhu kuti vasaongorore basa iri, kana kugashira chitendero …. Asi kumufaro weVatendi, … ndakagashira zvinotevera” (History of the Church, 1:158).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuChechi, paKirtland Ohio, 8 Kurume 1831 (History of the Church, 1:163–165). Munguva iyi yekutanga kweChechi, tsika imwechete yekutungamira misangano yeChechi yakanga isati yaronga. Zvisinei, tsika yekubvumira nhengo chete neavo vaive neshungu chaidzo dzekuziva zveChechi, kuti vapinde mumichechi yesakaramende nemamwe magungano eChechi zvakange zvave zvinhu zvaiitwa. Chakazarurwa chino chinotaura chido chaIshe maererano nekutonga nokutungamira michechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 8 Kurume 1831 (History of the Church, 1:166). Nguva iyi isati yasvika, Oliver Cowdery akanga ambofanobata chinzvimbo chemunyori wenhoroondo yeChechi uye semutapi. John Whitmer akanga asati atsvagwa kuitwa munyori wenhoroondo, asi akumbirwa kushanda munzvimbo iyi, akati achateerera kuda kwaIshe. Akanga atoshanda semunyori weMuporofita nokunyora zvizhinji zvezvakazarurwa zvakagashirwa muFayette, mudunhu reNew York.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, muna Kurume 1831 (History of the Church, 1:166–167). Muporofita akange abvunza kuna Ishe kuti angatevedze tsika ipi pakuwana nyika dzekuti Vatendi vagare. Iyi yaive nyaya inokosha pamusoro pekutama kwenhengo dzeChechi dzichibva kumabvazuva eUnited States, mukuteerera murairo waIshe wekuti vaifanira kuti vaungane muOhio (onai zvikamu 37:1–3; 45:64).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, naLeman Copley, paKirtland, Ohio, Kurume 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Mamwe magwaro enhoroondo anopa nguva yechakazarurwa ichi semuna Chivabvu 1831.) Leman Copley akanga agashira vhangeri asi akange achiri kubatirira kune dzimwe dzidziso dzeboka rainzi Shakers (Chikwata Chakabatana cheVanotenda Mukuonekwa kwa Kristu kweChipiri), uko kwaakambenge ari. Zvimwe zvaitendwa nemaShakers ndezvekuti kuuya kwaKristu kwechipiri kwakange kwatoitika kare uye nokuti akanga aonekwa achinge mudzimai wechidiki, Ann Lee; rubhabhatidzo rwemvura rwakange rwusingafungwe kuti rwakafanira; kudya nyama yenguruve kwakanga kwakanyatsorambidzwa, uye vazhinji vakange vasingadye kana nyama zvayo; uye upenyu hwekusaroora hwainzi hwakanaka kupfuura hwekuroora. Achitaura asati anyora chakazarurwa ichi, Muporofita akanyora, “Kuti tive nokunzwisisa kwakakwana panyaya iyi, ndakabvunza kuna Ishe, uye ndikagashira zvinotevera” (History of the Church, 1:167). Zvakazarurwa zvakaramba dzimwe dzidziso dzechikwata chemaShakers. Hama dzataurwa dziya dzakatora gwaro rezvakazarurwa izvi kuboka remaShakers (pedyo neCleveland, Ohio) uye dzakavaverengera rose, asi rakarambwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, Chivabvu 1831 (History of the Church, 1:170–173). Muporofita anoti vamwe vemagosa vakanga vasinganzwisise zviratidzo zvemweya yakasiyana-siyana yakapararira munyika uye nokuti chakazarurwa ichi chakanga chakapihwa semhinduro kumubvunzo wake pamusoro penyaya iyi. Zvainzi izvo zvishamiso zvemweya zvakanga zvisiri zvishoma pakati penhengo, vamwe vacho vaiti vari kugashira zviratidzo nezvakazarurwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paThompson, Ohio, Chivabvu 1831 (History of the Church, 1:173–174). Panguva iyi Vatendi vaitama kubva kumatunhu ekumabvazuva vakatanga kusvika muOhio, uye zvikave zvakafanira kuti kuitwe hurongwa chaihwo hwekugara kwavo. Sezvo basa iri raive chinzvimbo chabhishopi, Bhishopi Edward Partridge akatsvaga kurairwa pamusoro penyaya iyi, Muporofita akabvunza kuna Ishe.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kumagosa eChechi, paKirtland, Ohio, 7 Chikumi 1831 (History of the Church, 1:175–179). Mugungano rakanga raitwa paKirtland, rakatanga musi wa3 uchivharwa musi wa6 Chikumi. Pamuchechi uyu kugadzwa chaiko kwekutanga muchinzvimbo chemupirisiti wepamusoro kwakaitwa, uye zvimwe zviratidzo zvemweya yenhema uye inonyengedza zvakaonekwa zvikatukwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Algernon Sidney Gilbert, paKirtland, Ohio, Chikumi 1831 (History of the Church, 1:179–180). Sechikumbiro chaSidney Gilbert, Muporofita akabvunza kuna Ishe nezvebasa reHama Gilbert nekudomwa kwake muChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Newel Knight, paKirtland, Ohio, Chikumi 1831 (History of the Church, 1:180–181). Nhengo dzeChechi mubazi rekuThompson, Ohio, vakanga vachipesana munyaya dzainga dziri maererano nekupirwa kwezvinhu. Hudyire nemakaro zvakabuda pachena, uye Leman Copley akanga atyora chibvumirano chake chekutsaura purazi rake guru senzvimbo yenhaka yaVatendi vakanga vachisvika kubva kuColesville, New York, Ezra Thayre akanga arimo mukusawirirana uku. Pamusana paizvozvo, Newel Knight (mutungamiri webazi rekuThompson) nemamwe magosa vakanga vauya kuMuporofita vachibvunza kuti voita sei. Muporofita akabvunza kuna Ishe uye ndokugashira chakazarurwa chino. (Ona chikamu 56, chinove ndichochinoenderera mberi nenyaya yacho.)
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna William W. Phelps, paKirtland, Ohio, muna Chikumi 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, mudhindi, nemhuri yake vakanga vachangosvika paKirtland, uye Muporofita akatsvaka Ishe kuti ave nezivo pamusoro pavo.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, muna Chikumi 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, akanga adomwa kuti afambe kuenda kuMissouri naThomas B. Marsh (ona chikamu 52:22), akatadza kutanga hushumairi hwake apo mumwe wake angeagadzirira. Gosa Thayre akanga asina kugadzirira kuti asimuke aende parwendo rwake pamusana pekuve mukati mematambudziko epaThompson, Ohio (ona misoro yechikamu 54). Ishe vakapindura kubvunza kweMuporofita panyaya iyi nekupa chakazarurwa ichi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, muZioni, Ruwa rweJackson, Missouri, 20 Chikunguru 1831 (History of the Church, 1:189–190). Vachiita sekutaurwa kwazvakanga zvaitwa naIshe (chikamu 52), magosa vakanga vafamba kubva kuKirtland kuenda kuMissouri vachiona zvinhu zvizhinji zvakasiyana-siyana uye nekupikiswa. Mukufunga nechimiro chemaRamani uye nekushaya rujeko, hunhu uye nekunamata pakati pevanhu vose zvavo, Muporofita akati: “Ko renje richatumbuka riini seruva? Ko Zioni ichavakwa rinhiko mukubwinya kwayo, uye Temberi yenyu ichamira papi, umo ose marudzi achaenda mumazuva ekupedzisira?” (History of the Church, 1:189). Kubva pane izvozvi akagashira chakazarurwa ichi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, muZioni, Ruwa rweJackson, Missouri, 1 Nyamavhuvhu 1831 (History of the Church, 1:190–195). Pamusi weSabata rekutanga mushure mekusvika kweMuporofita nevamwe vake muRuwa rweJackson, Missouri kwakaitwa ungano yechinamato, uye nhengo mbiri dzikagashira rubhabhatidzo. Mukati mevhiki iroro, vamwe veVatendi veColesville veBazi reThompson uye nevamwewo vakasvika (ona chikamu 54). Vazhinji vaive neshungu dzekuda kuziva chido chaIshe maererano navo munzvimbo itsva iyi yekuungana.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, muZioni, Ruwa rweJackson, Missouri, 7 Nyamavhuvhu 1831 (History of the Church, 1:196–201). Asati anyora chakazarurwa chino, Muporofita anonyora achitsanangura nezvenyika yeZioni, umo makange zvino vanhu vaungana. Nyika yakapirwa, sekutaurwa kwazvakanga zvaitwa naIshe, uye nepanzvimbo paizoiswa temberi pakakumikidzwa. Ishe vanoita mirairo iyi kuti inangane neVatendi vari muZioni.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, muRuwa rweJackson County, Missouri, 8 Nyamavhuvhu 1831 (History of the Church, 1:201–202). Panguva iyi magosa akanga adomwa kuti adzokere kuMabvazuva vakada kuziva kuti vanofamba sei nenzira ipi nechavanofambisa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, pamahombekombe Rwizi rwunonzi Missouri, Mugonyorwa weMcIlwaine’s, 12 Nyamavhuvhu 1831 (History of the Church, 1:202–205). Parwendo rwavo rwekudzokera kuKirtland, Muporofita nemagosa gumi vakanga vafamba vachidzika neRwizi rweMissouri nemagwa. Muzuva rechitatu rerwendo, njodzi zhinji dzakaonekwa. Gosa William W. Phelps, muchiratidzo chezuva rakacheka nyika, akaona muparadzi achifamba musimba pamusoro pechiso chemvura.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, kumahombekombe eRwizi rweMissouri paChariton, Missouri, musi wa13 Nyamavhuvhu 1831 (History of the Church, 1:205–206). Pazuva iri Muporofita nechikwata chake, vakanga vari munzira kubva kuIndependence vachienda kuKirtland, vakasangana nemagosa mazhinji vakanga vari munzira kuenda kunyika yeZioni, uye mushure mekukwazisana norufaro, akagashira zvakazarurwa izvi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, mukupera kwaNyamavhuvhu 1831, (History of the Church, 1:206–211). Muporofita, Sidney Rigdon, naOliver Cowdery vakanga vasvika muKirtland musi wa27 Nyamavhuvhu vachibva kunoshanya kwavo kuMissouri. Achisuma chinyorwa chake chechakazarurwa chino, Muporofita akanyora kuti, “Mumazuva ano ekuvambwa kweChechi, kwaive nekuda kukuru kwekuwana izwi raIshe panyaya yose zvayo iri pamusoro neruponeso rwedu; uye zvino sezvo nyika yeZioni yakange zvino iyo yave chinhu chakakoshesesa chezvinhu zvaioneka panyika, ndakabvunza Ishe kuti ndiudzwe zvimwe pamusoro pekuungana kweVatendi, uye nekutengwa kwenzvimbo nedzimwewo nyaya” (History of the Church, 1:207).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kumagosa eChechi, paKirtland, Ohio, 11 Gunyana 1831 (History of the Church, 1:211–214). Muporofita akanga achigadzirira kutamira kuHiram, Ohio, kuti anotangisazve basa rake mukududzira Bhaibheri, iro rakanga raiswa parutivi paakanga ari muMissouri. Chikwata chehama chakanga charairwa kuti chiende kuZioni (Missouri) chakanga chiri mubishi rekugadzirira kusimuka muna Gumiguru. Panguva yebishi iyi, chakazarurwa ichi chakagashirwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa nekuna Joseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio muna Gumiguru 1831 (History of the Church, 1:218). Muporofita anotara chakazarurwa ichi semunamato.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paOrange, Ohio, 25 Gumiguru 1831 (History of the Church, 1:219–221). Iri raive zuva rekutanga remusangano mukuru waikosha. Achitaura zvekutanga pamusoro pechakazarurwa chino, Muporofita akanyora achiti, “Sekukumbira kwaWilliam E. McLellin, ndakabvunza kuna Ishe uye ndikagashira zvinotevera” (History of the Church, 1:220).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, Mbudzi 1831 (History of the Church, 1:224–225). Zuva racho raive remusangano mukuru, uye nokushambadzwa kwezvakazarurwa zvakanga zvatambirwa kare kubva kuna Ishe kuburikidza neMuporofita kwakatariswa kukaitwa (ona misoro yenyaya yechikamu 1). Zvakabvumiranwa kuti Oliver Cowdery naJohn Whitmer vanofanira kutora magwaro ezvakazarurwa vaende nawo kuIndependence, uko W. W. Phelps aizoashambadza seBhuku reMirairo. Vazhinji vehama vakapa uchapupu hwakadzama hunoera vachiti zvakazarurwa zvakanga zvanyorwa kuti zvishambadzwe zvakanga zvirokwazvo zviri zvechokwadi, sekupupurwa kwazvanga zvaitwa neMweya Mutsvene wakanga wadirwa pavari. Muporofita anonyora kuti mushure mekunge zvakazarurwa zvinozivikanwa sechikamu 1 zvagashirwa, pakave nekutaura kusina kunaka kwakanzwikwa pamusoro pemutauro wainge washandiswa mune zvakazarurwa. Chakazarurwa chino chakazotevera.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio Mbudzi 1831, zvakumbirwa naOrson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, William E, McLellin (History of the Church, 1:227–229). Kana dai chakazarurwa ichi chakapihwa semhinduro kuchikumbiro chekuti pfungwa yaIshe izivikanwe maererano nemagosa ataurwa zvizhinji zvirimo zvine chekuita neChechi yose.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, Mbudzi 1831 (History of the Church, 1:234–235). Kurongwa kwezvakazarurwa zvakanga zvakarongerwa kushambadzwa nokukurumidza kwakanga kwabvumirwa pamusangano mukuru waikosha musi wa1 Mbudzi. Musi wa3 Mbudzi, zvakazarurwa zviri muno zvinoratidzwa sechikamu 133 zvakapamhidzirwa zvikadaidzwa kuti zvitutsirwa. Nekuita kwemuchechi, Oliver Cowdery akadomwa kuti atakure magwaro akarongwa ezvakazarurwa nemirairo, kuenda nawo muIndependence, Missouri, kuti anodhindwa. Aifanirwawo kutakura mari yakange yaunganidzwa kuti ivakiswe Chechi muMissouri. Sezvo nzira yaaifamba nayo yaimuendesa nemunzvimbo dzakanga dzisina vagari vakawanda kusvika kumuganhu, mumwe wekufamba naye aidiwa.
Zvakazaruruwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 12 Mbudzi 1831 (History of the Church, 1:235–237). Nhoroondo yakanyorwa neMuporofita inoti misangano mikuru mina yaikosha yakaitwa kubvira musi wa1 kusvika musi wa12 Mbudzi. Mune wekupedzisira wemisangano iyi, kukosha kukuru kweBhuku reMirairo, iro rakazodaidzwa kuti Dzidziso neZvibvumirano, kwakataurwa; uye Muporofita anoriti “hwaro hweChechi mumazuva ano ekupedzisira, uye riri chipundutso kunyika, zvichiratidza kuti makiyi ezvakavanzika zveumambo hweMuponesi wedu akadzorerwa zvakare kumunhu” (History of the Church, 1:235).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita uye naSidney Rigdon, paHiram, Ohio, 1 Zvita, 1831 (History of the Church, 1:238–239). Muporofita akanga achienderera mberi nekududzira Bhaibheri, Sidney Rigdon ari munyori wake kusvika panguva yakagashirwa chakazarurwa chino, panguva iyoyi chakamboiswa parutivi kuti zvivaite kuti vagone kuzadzikisa zvairairwa imomo. Hama dzaifanira kuenda kunoparidza kuti vabvise pfungwa dzakaipa dzakange dzavepo maererano neChechi pamusana pezvakamboshambadzwa mumapepanhau naEzra Booth uyo akange arasika pachitendero.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith, Muporofita, paKirtland, Ohio, 4 Zvita 1831 (History of the Church, 1:239–241). Magosa akawanda nenhengo vakanga vaungana kuti vadzidze mabasa avo uye nokuti vasimbiswe zvakare mukudzidzisa kweChechi. Chikamu ichi kusanganiswa kwezvakazarurwa zviviri zvakagashirwa zuva rimwechetero. Ndima yekutanga kusvika kune yosere dzinozivisa kudaidzwa kwaNewel K. Whitney sabhishopi. Akadaidzwa akagadzwa, mushure mazvo ndima yechipfumbamwe kusvika kundima yechimakumi maviri nenhanhatu dzakagashirwa, dzichipa rumwe ruzivo rwekuti basa rabhishopi chii.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita uye naSidney Rigdon, paHiram, Ohio, 10 Ndira 1832 (History of the Church, 1:241–242). Kubvira mukutanga kwaZvita, Muporofita naSidney vakange vachiparidza, uye nokuita uku, zvizhinji zvakaitwa mukuseredza pfungwa dzakaipa dzaive dzamuka maererano neChechi (onai misoro yenyaya yechikamu 71).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, Ndira 1832 (History of the Church, 1:242). Muporofita anonyora: “Pakugashira izwi rinotevera raIshe [D&Z 73], ndakatanga zvakare kududzira Magwaro Matsvene, uye ndikashanda nesimba kusvika musi wemusangano mukuru wave kuda kusvika, uyo wakange uchiitwa musi wa25 Ndira. Munguva iyoyi, ndakagashirawo zvinotevera, sekutsanangurwa kweTsamba Yekutanga kuVaKorinte, Chaitsauko 7, ndima yechi14” (History of the Church, 1:242).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paAmherst, Ohio, 25 Ndira 1832 (History of the Church, 1:242–245). Musi uyu waive musi wemusangano mukuru wakanga warongwa kare. Pamusangano uyu Joseph Smith akatsigirwa uye akagadzwa seMukuru weHupirisita hwePamusoro. Mamwe magosa, akange awomerwa mukusvitsa vanhu pakunzwisisa shoko ravo, vakada kudzidza zvakadzama pamusoro pemabasa avo. Chakazarurwa chino chakatevera.
Chiratidzo chakapihwa kuna Joseph Smith uye naSidney Rigdon, paHiram, Ohio, 16 Kukadzi 1832 (History of the Church, 1:245–252). Achisuma kunyora kwake pamusoro pechiratidzo ichi, Muporofita akanyora kuti: “Pakudzoka kwangu kubva kumusangano mukuru weAmherst, ndakatanga zvakare kududzira magwaro matsvene. Kubva kune zvakazarurwa zvakasiyana-siyana izvo zvakanga zvatambirwa, zvaive pachena kuti zvinhu zvizhinji zvinokosha zvinobata ruponeso rwemunhu, zvakanga zvabviswa muBhaibheri kana kuti zvakarasika zvisati zvaiswa pamwechete. Zvairatidza zvega pakutarisa zvokwadi zvakanga zvasiiwa, kuti kana Mwari aipa mubairo kune wose maererano nezviito zvakaitwa mumuviri izwi rinoti ‘Denga’ richireva; musha weVatendi wokusingaperi, rinofanira kuve neumambo hwakapfuura humwechete. Nokudaro … tichidudzira Vhangeri reMutendi Johane, ini naGosa Rigdon takaona chiratidzo chinotevera” (History of the Church, 1:245). Maive mushure mekunge Muporofita adudzira gwaro raJohane 5:29 pakapihwa chiratidzo ichi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, muna Kurume 1832 (History of the Church, 1:253–255). Muporofita akanyora, “Maererano nenyaya yekududzira Magwaro matsvene, ndakagashira kutsanangura kunotevera kweZvakazarurwa zveMutendi Johane” (History of the Church, 1:253).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, Kurume 1832 (History of the Church, 1:255–257). Hurongwa hwakapihwa naIshe kuna Joseph Smith nechinangwa chekumisa imba yekuchengetera kuitira varombo. Zvakanga zvisina kufanira kuti panguva dzose mazita evanhu vaitaurwa navo naIshe mune zvakazarurwa, azivikanwe nenyika; saka, mukushambadzwa kwechino uye nezvakazarurwa zvakatevera, hama dzakasheedzwa vakataurwa nemamwe mazita asiri avo chaiwo. Pazvakanga zvisisina mhosva kuti mazita azivikanwe, mazita avo chaiwo akapihwa akakomberedzwa. Sezvo pasisina nhasi uno chikonzero chekuvanza mazita, mazita chaiwo zvino ndiwo ave kushandiswa sezvaanopihwa mumagwaro ekutanga.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram,Ohio, muna Kurume 1832 (History of the Church, 1:257).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio munaKurume 1832 (History of the Church, 1:257).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, Kurume 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams anodaidzwa kuve mupirisita wepamusoro nekuve gurukota reHutungamiri hweHupirisita Hwepamusoro. Zvinyorwa zvenhoroondo zvinoratidza kuti chakazarurwa ichi pachakagashirwa munaKurume 1832, chakadaidza Jesse Gause kuchigaro chegurokota raJoseph Smith muHutungamiri. Zvisinei paakatadza kuenderera mberi arimutsika inopindirana nekudaidzwa uku, basa iri rakapedzisira raiswa kuna Frederick G. Williams. Chakazarurwa ichi (chine zuva raKurume 1832) chinofanira kutariswa sechinhano chemazvo muhurongwa kekutanga hweHutungamiri Hwekutanga, zvakanangana nokudaidzwa kwegurukota mudare iroro uye nokutsanangura chiremerera chechigaro ichocho. Muzvarwa Gause akashanda kwechinguvana asi akachekwa muChechi munaZvita 1832. Muzvarwa Williams akagadzwa kuchigaro chataurwa ichi musi wa18 Kurume 1833.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, muRuwa rweJackson, Missouri, 26 Kubvumbi 1832 (History of the Church, 1:267–269). Zuva iri raive zuva rekusangana kwedare reChechi umo Joseph Smith Muporofita akatsigirwa seMutungamiri weHupirisita Hwepamusoro, chinzvimbo ichi chiri chaakanga ambogadzwa pamusangano wevapirisita vepamusoro, magosa, nenhengo, paAmherst, Ohio, musi wa25 Ndira 1832 (onai musoro wenyaya wechikamu 75). Pekutanga mazita asiri emazuva ose akashandiswa mukushambadzwa kwezvakazarurwa zvino kuvanza vanhu vaitaurwa (ona musoro wenyaya wechikamu 78).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paIndependence, Missouri, 30 Kubvumbi 1832 (History of the Church, 1:269–270). Chakazarurwa ichi chakagashirwa Muporofita agere mudare nevamwe vake.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio 22 na23 Gunyana 1832 (History of the Church, 1:286–295). Mumwedzi waGunyana, magosa akanga atanga kudzoka kubva kumabasa avo ekuparidza kunyika dzekumabvazuva nekuzopa zvirevo pamusoro pemabasa avo. Pavakanga vari pamwechete mumwaka vekufara uyu ndipo pakagashirwa mazwi aya. Muporofita akachiti chizaruro pamusoro pehupirisita.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 27 Mbudzi 1832 (History of the Church, 1:298–299). Chikamu chino ndezvakatorwa kubva mutsamba yeMuporofita kuna W. W. Phelps, akanga achigara muIndependence, Missouri. Zvakapihwa kuti zvipindure mibvunzo pamusoro peavo Vatendi vakanga vatamira kuZioni asi vasina kugashira nhaka dzavo maererano nehurongwa hwakadzikwa muChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 6 Zvita 1832 (History of the Church, 1:300). Chakazarurwa chino chakatambirwa panguva Muporofita paakanga achidzokorora nekupepeta magwaro ezvinyorwa zvekududzira Bhaibheri.
Zvakazarurwa nekuporofitwa pamusoro pehondo, zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, 25 Zvita 1832 (History of the Church, 1:301–302). Chikamu chino chakagashirwa panguva apo hama dzaifunga nekuzeya pamusoro pezvehunhapwa hwevanhu vatema veAfrica muAmerica uye nehunhapwa hwevana vevanhu munyika dzose.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 27 Zvita 1832 (History of the Church, 1:302–312). Zvakadaidzwa neMuporofita kunzi “shizha remuorivhi” rakatemwa paMuti weParadiso, Shoko raIshe rerunyararo kwatiri” (History of the Church, 1:316). Zvinoonekwa kubva muzvinyorwa zvenhoroondo kuti zvidimbu zvezvakazarurwa zvino zvakagashirwa musi wa27 na28 Zvita 1832 na3 Ndira 1833.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburukidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtand, Ohio 27 Kukadzi 1833 (History of the Church, 1:327–329). Nekuda kwekuputa fodya kwevarume vekutanga mumichechi yavo, Muporofita akaitwa kuti afunge pamusoro penyaya iyi; nokudaro akabvunza kuna Ishe pamusoro pazvo. Zvakazarurwa zvino zvinozivikanwa seShoko reUngwaru, zvakapihwa pamusana pazvo. Ndima nhatu dzekutanga dzakanyorwa neMuporofita sechisumo chakafemerwa netsananguro.
Zvakazarurwa kuna Joseph Smith Muporofita, zvakapihwa paKirtland, Ohio, 8 Kurume 1833 (History of the Church, 1:329–331). Chakazarurwa chino chinhanho chinoenderera mukumiswa kweHutungamiri Hwekutanga (tarisai misoro yenyaya muchikamu 81); nokudaro vatevedzeri vakataurwa vakagadzwa musi wa18 Kukadzi 1833.
Zvakazarurwa zvakapiwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 9 Kurume 1833 (History of the Church, 1:331–332). Muporofita panguva iyoyi akange ari mubasa rekududzira Testamente yaKare. Asvika pachidimu chiya chezvinyorwa zvakare zvinodaidzwa kuti Apokirifa, akabvunza kuna Ishe uye akagashira kurairwa uku.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 15 Kurume 1833 (History of the Church, 1:333). Zvakazarurwa izvi zvakanangana naFrederick G. Williams, uyo akange achangobva mukusarudzwa kuti ave mutevedzeri muHutungamiri Hwekutanga.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 6 Chivabvu 1833 (History of the Church, 1:343–346).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 6 Chivabvu 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, naJared Carter vanodomwa kuti vave muchita cheruvako rweChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtkand, Ohio, 1 Chikumi 1833 (History of the Church, 1:350–352). Chakazarurwa chino kuenderera mberi kwemirairo mitsvene yekuvakwa kwedzimba dzekunamatira nokudzidziswa, kunyanya imba yaIshe (onai chikamu 88:119–136 uye nechikamu 94).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, zvinoratidza kurongwa kweguta kana hoko yeZioni paKirtland, Ohio, 4 Chikumi 1833, semufananidzo kuVatendi muKirtland (History of the Church, 1:352–353). Paive pamuchechi mukuru wevapirisita vepamusoro, uye nhau huru yaitaurwa yaive yekutengesa dzimwe nzvimbo, dzaizivikanwa nokunzi purazi yaFrench, yaive yeChechi pedyo neKirtland. Sezvo muchechi mukuru wakatadza kubvumirana kuti ndiani angatore, vose vakabvumirana kuti vabvunze Ishe maererano nenyaya iyi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio 2 Nyamavhuvhu 1833 (History of the Church, 1:400–402). Chakazarurwa chino chinotaura kunyanya nezvenyaya dzeVatendi vari muZioni, muRuwa rweJackson, Missouri, semhinduro kumibvunzo yeMuporofita kuna Ishe. Nhengo dzeChechi kuMissouri panguva iyoyi dzakanga dziri mukati mekutambudzwa kukuru uye, 23 Chikunguru 1833, dzakanga dzamanikidzwa kusaina chibvumirano chekuti dzibve kuRuwa rweJackson.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirland, Ohio, 6 Nyamavhuvhu 1833 (History of the Church, 1:403–406). Chakazarurwa ichi chakauya pamusoro pekutambudzwa kweVatendi muMissouri. Zvakanga zvichinzwisisika kuti Vatendi muMissouri, vatambudzwa varasikirwa nezvinhu, vanganzwe kuda kudzorera nekutsividza. Nokudaro, Ishe vakapa chakazarurwa ichi. Kana dai zvawo mamwe mashoko ezvematambudziko ekuMissouri akanga atosvika kuMuporofita muKirtland (chinhambwe chemazana mapfumbamwe emamaira) kuipa kwezvinhu kwaitokwanisa kuzivikanwa naye pazuva iri, kuburikidza chete nekuzarurirwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, kuna John Murdock, Nyamavhuvhu 1832, paHiram, Ohio. Kana dai zvazvo magwaro eDzidziso neZvibvumirano kubvira muna 1876 akati zvakazarurwa zvino ndezve paKirtland, Nyamavhuvhu 1833, magwaro ekutanga nezvimwe zvinyorwa zvenhoroondo zvinotsinhira kuruzivo chairwo nguva yacho chaiyo.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, naSidney Rigdon, paPerrysburg, New York, 12 Gumiguru 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Hama idzi mbiri dzainge dzava nemazuva akati kuti vasiri pane mhuri dzavo.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio 16 Zvita 1833 (History of the Church, 1:458–464). Panguva iyi Vatendi vakanga vaungana muMissouri vakanga vachitambudzwa zvikuru. Mhomho dzakanga dzavabvisa mudzimba dzavo muRuwa rweJackson; uye vamwe veVatendi vakanga vayedza kunogara kuRuwa rweVan Buren, asi kutambudzwa kwakavatevera. Chikwata chikuru cheVatendi chakanga panguva iyoyo chiri muRuwa rweClay, Missouri. Kutyisidzirwa nerufu kwevanhu veChechi kwakanga kwakawanda. Vanhu vakanga varasikirwa nemidziyo yemumba, zvipfeko, zvipfuwo, nezvimwewo zvinhu zvavo; uye zhinji dzembeu dzavo dzakanga dzaparadzwa.
Zvinyorwa zvekurongwa kwedare repamusoro rekutanga reChechi, paKirtland, Ohio, 17 Kukadzi 1834 (History of the Church, 2:28–31). Zvinyorwa zvekutanga zvakanyorwa neMagosa Oliver Cowdery naOrson Hyde. Mushure memazuva maviri, zvinyorwa izvi zvakagadziriswa neMuporofita, ndokuverengerwa dare repamusoro, uye ndokubva zvabvumwa nedare repamusoro. Ndima diki 30 kusvika ku32, dziine zvekuita nedare reVaapositori vaneGumi neVaviri, dzakapamhidzirwa neMuporofita Joseph Smith muna 1835 apo paakagadzira chikamu chino kuti chishambadzwe muDzidziso neZvibvumirano.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 24 Kukadzi 1834 (History of the Church, 2:36–39). Chakazarurwa ichi chakagashirwa mushure mekusvika muKirtland, Ohio, kwaParley P. Pratt naLyman Wight, avo vakanga vabva kuMissouri kuti vazotaura neMuporofita pamusoro pekuyamurwa nekudzorerwa kweVatendi kuRuwa rweJackson.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, 23 Kubvumbi 1834, maererano nehurongwa hwemubatanidzwa kana hurongwa hweChechi hwakamisirwa kubatsira varombo (History of the Church, 2:54–60). Rakanga riri zuva remusango weDare reVatungamiri vekutanga nevapirisita vepamusoro, umo makazeyiva nyaya dzekushaya kwevanhu hurongwa hwemubatanidzwa paKirtland hwakanga hwave kumbobviswa uye hozorongwa patsva naizvozvo zvinhu zvaitorwa seutariri zvakange zvave kugoverwa nhengo dzehurongwa.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paRwizi rweFishing, Missouri, 22 Chikumi 1834 (History of the Church, 2:108–111). Kurwiswa nemhomo dzevanhu kweVatendi muMissouri kwakanga kwawanda, uye mapoka akarongwa aibva mumatunhu akasiyana-siyana akanga atsidza kuda kwawo kuparadza vanhu. Muporofita akanga abva kuKirtland akatungamira chikwata chainzi Musasa weZioni, vachiunza zvipfeko nezvekudya. Chikwata ichi chakanga chiri paRwizi rweFishing, Muporofita akagashira zvakazarurwa izvi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 25 Mbudzi 1834 (History of the Church, 2:170–171). Chakazarurwa ichi chakanangana naWarren A. Cowdery, mukoma waOliver Cowdery.
Zvakazarurwa zviri maererano nehupirisita, zvakapihwa kubirikidza naJoseph Smith, Muporofita, paKirtland, Ohio, musi wa28 Kurume 1835 (History of the Church, 2:209–217). Pazuva rataurwa, vaneGumi neVaviri vakasangana sedare, vachireurura kusasimba kwavo pamunhu nemunhu nezvaaitadza, uye vachitaura rutendeuko, uye vachitsvaka kuramba vakatungamirwa naIshe. Vakange vave pedyo nokuparadzana kuti vanoparidza kumaruwa avakanga vapihwa. Kana dai zvazvo zvimwe zvechikamu chino zvakagashirwa pazuva rataurwa, zvinyorwa zvenhoroondo zvinotsinhira kuti zvidimu zvechikamu chino zvakagashirwa munguva dzakasiyana-siyana, zvimwe zvacho zvakagashirwa muna Mbudzi 1831.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paKirtland, Ohio, 26 Zvita (History of the Church, 2:345). Chikamu ichi chakagashirwa chakumbirwa naLyman Sherman, uyo akange akagadzwa semupirisita wepamusoro uye semumwe wevane makumi manomwe, uye uyo akanga auya kuMuporofita nechichemo chekuzarurirwa kuti aziviswe basa rake.
Munamato wakaitwa pakupirwa kwetemberi yeKirtland, Ohio, musi wa27 Kurume 1836 (History of the Church, 2:420–426). Maererano nezvakanyorwa neMuporofita, munamato uyu wakapihwa kwaari mune zvakazarurwa.
Zviratidzo zvakaoneswa kuna Joseph Smith Muporofita, naOliver Cowdery mutemberi paKirtland, Ohio, 3 Kubvumbi 1836 (History of the Church, 2:435–436). Chiitiko chacho chaive zuva remuchechi weSabata. Muporofita anonyora zvakaitika achitanga nemazwi aya: Mumasikati, ndakayamura vamwe Vatungamiri nokupa kudya kwemanheru kwaIshe kuChechi, ndichikutambira kubva kune vaneGumi neVaviri, avo vakanga vakaropafadzwa kuti vatungamire vari pachigaro chinoyera pazuva iri. Ndapedza kuitira hama dzangu basa iri, ndakaenda panzvimbo pakakwirira, zvidzitiro zvakanga zviripo zvakanga zvadzikiswa, uye ndikakotama naOliver Cowdery mumunamato wakakosha, usinganzwike. Mushure mekunge ndasimuka kubva makunamata, chiratidzo chinotevera ichi chakazururirwa kwatiri tose (History of the Church, 2:435).
Zvakazarurwa zvakapiwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paSalem, Massachusetts, 6 Nyamavhuvhu 1836 (History of the Church, 2:465–466). Panguva iyi vatungamiri veChechi vakanga vari muchikwereti pamusana pekushanda kwavo mukushumira. Vanzwa kuti vanogona kuwana mari yakawanda kuSalem, Muporofita, naSidney Rigdon, Hyrum Smith, uye naOliver Cowdery vakaendako vachibva kuKirtland, Ohio, kunotsvaga nyaya iyi uye vachiparidzawo vhangeri. Varume ava vakaita zvizhinji zvebasa reChechi uye vakaparidza. Pazvakave pachena kuti hakuna mari yakanga ichiuya, vakadzokera kuKirtland. Zvizhinji zvezvinhu zvikuru munyaya iyi zvinoonekwa mumazwi ezvakazarurwa zvino.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita kuna Thomas B. Marsh, paKirtland, Ohio 23 Chikunguru 1837 (History of the Church, 2:499–501). Chakazarurwa ichi chineshoko raIshe kuna Thomas B. Marsh pamusoro peVaapositori vaneGumi neVaviri veGwayana. Muporofita anonyora kuti chakazarurwa ichi chakatambirwa muzuva rakatanga kuparidzwa vhangeri muEngland. Thomas B. Marsh panguva iyoyi akanga ari Mutungamiri wechikwata cheVaapostori vaneGumi neVaviri.
Mhinduro kune mimwe mibvunzo pamusoro pezvinyorwa zvaIsaya, dzakapihwa naJoseph Smith Muporofita, Kurume 1838 (History of the Church, 3:9–10).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paFar West, Missouri 17 Kubvumbi 1838 (History of the Church, 3:23).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paFar West, Missouri, 26 Kubvimbi 1838 zvichizivisa chido chaMwari pamusoro pekuvakwa kwenzvimbo iyoyo uye nemba yaIshe (History of the Church, 3:23–25). Chakazarurwa ichi chakanangana nevanotungamira vashandi veChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, pedyo nepaFerry yaWight, panzvimbo yainzi Spring Hill, Ruwa rweDaviess, Missouri, 19 Chivabvu 1838 (History of the Church, 3:35).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paFar West Missouri, 8 Chikunguru 1838, pamusoro pemabasa aidiwa nguva iyoyo kuna William Marks, Newel K. Whitney, naOliver Granger (History of the Church, 3:45–46).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paFar West, Missouri, 8 Chikunguru 1838, yaive mhinduro kuchichemo, “Tiratidzei chido chenyu Ishe, pamusoro pevaneGumi neVaviri” (History of the Church, 3:46).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paFar West, Missouri, 8 Chikunguru 1838, semhinduro kuchichemo chake: “Ishe! Ratidzai kumuranda wenyu kuti munoda zvakawanda zvakadii pamidziyo yevanhu venyu mukubvisa chegumi” (History of the Church, 3:44). Mutemo wechegumi, sekunzwikwa kwaunoitwa nhasi, hauna kunge wakapihwa kuChechi zvakazarurwa zvino zvisati zvauya. Izwi rinoti chegumi riri mumunamato wabva mukutaurwa uye uri mune zvakazarurwa zvakatanga (64:23; 85:3; 97:11) hauna kunge uchireva chidimbu chimwechete pagumi chete, asi yose mipiro inoitwa nekuda, kana kupa kuhomwe yeChechi. Ishe vakambenge vapa kuChechi mutemo wekutsaura uye nehutariri hwemidziyo, uwo nhengo (Kunyanya magosa anotungamira) dzaipinda mauri nechibvumirano chakanga chichifanira kusapera. Pamusana pekutadza kwevazhinji mukuchengeta chibvumirano ichi, Ishe vakachibvisa kwechinguva uye ndokubva vavapa munzvimbo yacho murau wechegumi kuChechi yose, Muporofita akabvunza Ishe kuti pazvinhu zvevanhu vaida zvakawanda sei zvokushandisa mumabasa anoyera. Mhinduro yacho ndicho chakazarurwa chino.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paFar West, Missouri, 8 Chikunguru 1838, zvichizivisa mashandisirwo yemidziyo yakange yapihwa sechegumi sekutaura kwazvakaitwa muzvakazarurwa zvichangotaurwa nezvazvo muchikamu 119 (History of the Church, 3:44).
Munamato nehuporofita hwakanyorwa naJoseph Smith Muporofita paakange ari musungwa mujeri repaLiberty, Missouri, zvine zuva20 Kurume 1839 (History of the Church, 3:289–300). Muporofita nevafambidzani vakawanda vakanga vagara mutirongo kwemwedzi yakati kuti. Matsamba avo nokuchema kwavo kuvakuru-vakuru uye nokuvatongi zvakatadza kuvaita kuti vasunungurwe.
Izwi raIshe kuna Joseph Smith Muporofita, paakange ari musungwa mujeri repaLiberty, Missouri, Kurume 1839 (History of the Church, 3:300–301).
Basa reVatendi pamusoro pevanovanetsa sekutsanangurwa kwazvakaitwa naJoseph Smith Muporofita, ari musungwa mujeri paLiberty, Missouri, Kurume 1839, (History of the Church, 3:302–303).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paNauvoo, Illinois, 19 Ndira 1841 (History of the Church, 4:274–286). Pamusana pekushungurudzwa kwavekuwanda nehurongwa huri kunze kwemutemo huri kuitwa nevabati vemahofisi, Vatendi vakamanikidzwa kuti vabve kuMissouri. Gwaro rekuti vaparadzwe rakaitwa naLilburn W. Boggs, gavhuna weMissouri, rakanyorwa musi wa27 Gumiguru 1838, rakavasiya vasisina chimwe chekuita kunze kwekubva (History of the Church, 3:175). Muna 1841, apo pakapihwa chakazarurwa chino, guta reNauvoo, riri pakange paine musha weCommerce, Illinois, rakanga ravakwa nevatendi, uye ipapa ndipo pakanga pamiswa muzinda weChechi.
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paNauvoo, Illinois, Kurume 1841 maererano neVatendi vemudunhu reIowa (History of the Church, 4:311–312).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, mumba maBrigham Young, paNauvoo, Illinois 9 Chikunguru 1841 (History of the Church, 4:382). Panguva iyi Brigham Young akanga ari Mutungamiri weChikwata cheVaapositori vaneGumi neVaviri.
Tsamba yakabva kuna Joseph Smith Muporofita ichienda kuVatendi VaMazuva Ekupedzisira paNauvoo, iine gwara rekubhabhatidzwa kwevakafa, yakadhindhwa paNauvoo 1 Gunyana 1842 (History of the Church, 5:142–144).
Tsamba yakabva kuna Joseph Smith Muporofita weChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira, iine mimwe mirairo pamusoro pekubhabhatidzwa kwevakafa, yakatsikiswa paNauvoo. Illinois, 6 Gunyana 1842 (History of the Church, 5:148–153).
Mazwi akapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, paNauvoo, Illinois, 9 Kukadzi 1843, achizivisa nezvemakiyi makuru matatu ayo anoratidza nzira kwayo yekusiyana kwengirozi dzinosumira nekwemweya (History of the Church, 5:267).
Mazwi akapihwa kuna Joseph Smith Muporofita paRamus, Illinois, 2 Kubvumbi 1843 (History of the Church, 5:323–325).
Mirairo yaJoseph Smith Muporofita, yakapihwa paRamus, Illinois, 16 na 17 Chivabvu 1843 (History of the Church, 5:392–393).
Zvakazarurwa zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paNauvoo, Illinois, zvakanyorwa musi wa12 Chikunguru 1843, zviri maererano nechibvumirano chisingaperi, zvichisanganisa kusaguma kwechibvumirano cheroorano, uyewo nevakadzi vakawanda (History of the Church, 5:501–507). Kana dai zvazvo zvakazarurwa izvi zvakanyorwa muna 1843, zviri pachena kubva kuzvinyorwa zvenhoroondo kuti dzidziso nemisimboti iyi zviri muzvakazarurwa zvino zvakange zvichizivikanwa nemuporofita kubvira muna 1831.
Zvakazarura zvakapihwa kuburikidza naJoseph Smith Muporofita, paHiram, Ohio, 3 Mbudzi 1831 (History of the Church, 1:229–234). Achitsanangura chakazarurwa chino Muporofita akanyora kuti, “Panguva iyi paive nezvinhu zvizhinji zvaida kuzivikanwa nemaGosa maererano nokuparidzwa kweVhangeri kuvagari vemunyika, uye pamusoro pekuunganidza; uye kuti tifambe nechiedza chechokwadi, nokuti tidzidziswe kubva kumusoro, musi wa3 Mbudzi, 1831, ndakabvunza kuna Ishe uye ndikagashira zvakazarurwa zvakakosha zvinotevera” (History of the Church, 1:229). Chikamu chino chakatanga kuiswa mubhuku reDzidziso neZvibvumirano sezvakapamhidzirwa, asi ndokuzoiswa sechikamu mumashure.
Chirevo chechitendero pamusoro pedzihurumende nemitemo yose, zvakatorwa nekutenderana kwemunhu wose pagungano reChechi yakaitwa paKirtland, Ohio, 17 Nyamavhuvhu 1835 (History of the Church, 2:247–249). Paive pamuchechi wevatungamiri veChechi, vakaunzwa pamwechete kuti vazoona zvakanga zvichizoiswa mukudhindwa kwekutanga kweDzidziso neZvibvumirano. Panguva iyoyo, chirevo chino chakapihwa musumo unoti: “Kuti zvatinotenda pamusoro pehurumende yepano pasi nemitemo yose yose zvisazotsanangurwa zvisiri izvo kana kusanzwisiswa, tafunga kuti zvakafanira kuti tipe, mukupera kwebhuku rino, pfungwa dzedu pamusoro pazvo” (History of the Church, 2:247).
Kuponderwa Chitendero kwaJoseph Smith Muporofita nemukoma wake, Hyrum Smith Patiriyaki weChechi, paCarthage, Illinois, 27 Chikumi 1844 (History of the Church, 6:629–631). Gwaro rino rakanyorwa naGosa John Taylor weDare revaneGumi neVaviri, akaona zvichiitika.
Izwi uye nechido chaIshe, chakapihwa kuburikidza naMutungamiri Brigham Young paWinter Quarters, musasa weIsraeri, Dunhu reOmaha, pamahombekombe ekumadokero eRwizi rweMissouri, pedyo neCouncil Bluffs, lowa (Journal History of the Church [Zvinyorwa zveNhoroondo yeChechi], 14 Ndira, 1847).
Chiratidzo chakapihwa kuna Joseph Smith Muporofita, mutemberi paKirtland, Ohio, 21 Ndira 1836 (History of the Church, 2:380–381). Raive zuva rekuita zvemaendawumenti sekuratidzwa kwazvakange zvaitwa.
Chiratidzo chakapihwa kune Mutungamiri Joseph F. Smith kuSalt Lake City, Utah, musi wa3 Gumiguru 1918. Mukutaura kwake kwekuzarura muchechi mukuru wekaviri pagore wechimakumi masere nepfumbamwe weChechi, musi wa4 Gumiguru 1918, Mutungamiri Smith akati vakanga vagashira mashoko matsvene akawanda mumwedzi yakanga yapfuura. Mamwe emashoko aya, ari nezvekushanya kweMuponesi kumweya yevakafa zvakange muviri wake uri muguva, Mutungamiri Smith akanga azvitambira semarimwezuro acho. Zvakanyorwa pakarepo mumashure mekupera kwemuchechi mukuru uyu. Musi wa31 Gumiguru 1918, zvakaiswa kumakurokota eHutungamiri Hwekutanga, Dare revaneGumi neVaviri, naPatiriyaki, uye vakazvibvuma vose.
Magwaro ekumapepanhau akatumirwa nechinangwa chezvematongerwo enyika, kubva kuGuta reSalt Lake, ayo akashambadzwa kwose kwose, zvakaita kuti dare reUtah Commission, mugwaro raro razvino kune Gurukota rezveMukati Menyika, vachiti barika richiri kuitwa uye vachiti kune makumi mana kana kupfuura eroorano yakadaro yakaitwa muUtah kubvira munaChikumi kana mukati megore rapfuura, zvakare nokutiwo mukutaura muvanhu vatungamiri veChechi vanodzidzisa, vachikurudzira nokutunha kuti kuita uku kwebarika kurambe kuripo—
Musi wa30 Gunyana 1978, paMuchechi Mukuru weChechi yose rechizana nemakumi mana nesere reChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira rinoitwa pagore, zvinotevera zvakaturwa neMutungamiri N. Eldon Tanner, Gurukota Rekutanga muHutungamiri hweKutanga hweChechi: